Amathiphu: Ngemuva kokufomatha, yonke into isendaweni yayo | Kusuka kuLinux
Amathiphu: Ngemuva kokufomatha, yonke into isendaweni yayo
Lo mbhalo uzinikele kakhulu kubasebenzisi abasha be I-GNU / Linux, eyashicilelwa yimina esikhathini esithile esidlule kuphrojekthi esizoqhubeka nayo kungekudala, ebizwa Iphrojekthi yeCepero.
Ngangiwumsebenzisi weWindows iminyaka engaphezu kwengu-8, futhi uma kunokuthile okungikhathaza kakhulu, bekufanele ngihlele futhi ngilungiselele wonke amafolda nezinhlelo ebengisebenza ngazo nsuku zonke ngemuva kokufakwa okusha kohlelo lokusebenza.
Enye yezinto zokuqala ezithathe iso lami ngayo I-GNU / Linux, bekuyiqiniso lokuthi ngemuva kokufometha ukwahlukanisa izimpande (okuku-Windows kungaba yi-disk C :), amafolda ami ahlala endaweni efanayo futhi ndawonye nawo, konke okunye: izithonjana ezifanayo, i-pointer efanayo, iphepha lodonga elifanayo kanye nezilungiselelo ezifanayo zezinhlelo zami zokusetshenziswa kwansuku zonke njengeklayenti leposi noma isiphequluli. Kwenzeka kanjani lokhu? Impendulo ilula kakhulu.
Lokhu kungenxa yokuthi ukwabiwa kwe- I-GNU / Linux, izilungiselelo zomsebenzisi (ngaphandle kokuthi usho ngenye indlela ngesixhumanisi esingokomfanekiso noma elinye iqhinga) zigcinwa ngokuzenzakalela kufolda / ikhaya / umsebenzisi / okuyingxenye ehlose ukugcina idatha yomsebenzisi, into efana nozakwabo wediski D:.
Lezi zilungiselelo zigcinwa kumafolda afihliwe, (amafolda aqukethe isikhathi ngaphambi kwegama)* futhi ukuze zibuyiselwe futhi kufanele sihlangabezane nezimfuneko ezimbili lapho ufometha:
Musa ukufometha ukwahlukanisa / ekhaya.
Ukubuyela ku- beka igama lomsebenzisi elifanayo ukuze uhlelo setha ukwahlukanisa okufanayo / kwasekhaya.
Ngale ndlela, lapho isikhathi siqala futhi singena ngemvume ngomsebenzisi wethu ojwayelekile, yonke into ihlala endaweni yayo.
Okubalulekile: Uma ukhethe inketho yokucela iphasiwedi ukususa ukubhala ngemfihlo ifolda yakho siqu (le ndlela isethwe ngesikhathi sokufakwa) kumele ngibeke ifayela le- iphasiwedi efanayo obukade unakho phambilini, ngaphandle kwalokho ngeke ube nezimvume ngokwakho / ekhaya kungakhathalekile ukuthi umsebenzisi uyefana.
1 Ukwazi okungaphezulu.
2 Ukuchaza yonke le mbono ngamagama ambalwa:
En I-GNU / Linux singathola ukucushwa okwabiwe noma okwenziwa ngumsebenzisi ngamunye. Okukodwa yilabo abasindiswe kufayela le- / ekhaya yomsebenzisi ngaphakathi kwamafolda afihliwe njengoba kuchaziwe ngenhla, futhi okwabiwe yikho okusindiswayo (njengezimpande) kufolda / usr / share /.
Ngaphakathi / usr / share / Kunamafolda amabili angaheha abasebenzisi: icons y themes. Kokuqala, izithonjana kanye nezikhombisi ziyagcinwa, kuthi kowesibili kube nezindikimba IGtk y I-Metacity, esizokhuluma ngayo kamuva.
Uma sakha lawa mafolda afanayo ngaphakathi kwe- / ekhaya yomsebenzisi bese wengeza iphoyinti ngaphambili (.icons, .izindikimba) ukuzifihla, lapho uhlelo seluqalile, kuzobacubungula futhi nokwenza ukucushwa kwethu.
Ngakho-ke, uma sifuna ukuba nephakethe lesithonjana, ipakethe ye-Gtk, noma ingqikithi yesikhombisi, ehlukile kuleyo abanye abasebenzisi abangayikhetha, siyifaka ngaphakathi kwala mafolda / ekhaya.
Ukuchaza yonke le mbono ngamagama ambalwa:
Uma sibeka izithonjana zethu, izingqikithi namafonti ngaphakathi kwamafolda .icons, .izindikimba o amafonti bakithi / ekhaya, kuphela esizokwazi ukufinyelela kuzo, uma sizifaka ngaphakathi kwamafolda afanayo kepha ku- / usr / share, bonke abasebenzisi bohlelo bazokwazi ukufinyelela kubo.
Okubalulekile: Kunconywa njalo, ikakhulukazi uma sikwenza ngesandla, kopisha imifanekiso nezindikimba ngaphakathi kwe- / ekhaya, ngoba imvamisa ifolda / usr / share Iyasuswa lapho sifometha uhlelo lwethu.
Izindawo ezijwayelekile zedeskithophu ezinjenge- I-Gnome o KDE Basenzela lo msebenzi, bekopisha into ngayinye kufolda yayo ehambisanayo ngohlelo lokusebenza olunikezelwe ukwenza ngokwezifiso ideskithophu, kepha lokhu kuhle ukwazi kwezinye izindawo zomsebenzi ezifana Xfce, noma uma sisebenzisa umphathi wewindi njenge I-Openbox o Fluxbox.
Manje ngaso sonke isikhathi lapho sifaka kabusha, sizoba nakho konke endaweni ...
*Ukukhombisa amafolda afihliwe ku- I-Gnome, siya kumhloli wefayela bese sisebenzisa inhlanganisela yokhiye I-Ctrl + h. Noma singaya kwimenyu Buka »Khombisa / Fihla Amafayela afihliwe. Uma kwenzeka kuba KDE con I-Dolphin, kwenziwa ngokusebenzisa inhlanganisela yokhiye I-Alt +. (khomba).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Amathiphu: Ngemuva kokufomatha, yonke into isendaweni yayo
Ikhaya elizimele liyindlela engcono yokugwema ukusetha yonke into futhi, kubi ukuthi ngiyilondoloze
Yilokho impela okumayelana nakho .. Hlukanisa / ikhaya kusuka ku- /
Ngakho-ke ukubaluleka kokufakwa, okungenani kwehlukile / ekhaya kusuka /
Kukhona labo ababeka / boot / usr nabanye kepha ngiyaneliseka nge / home, / and swap.
Abantu abaningi banomkhuba omubi wokungenzi ukufomatha ngokwezifiso futhi bahlanganise yonke into ekwahlukaneni okunwetshiwe okuhlanganisa yonke idiski (umkhuba omubi we-distros wabantu)
Iqiniso ukuthi kubaluleke kakhulu ukonga umsebenzi uma kungenzeka kufakwe kabusha. Vele, ukushiya uhlelo lusha, amanye amafayela wokumisa kuzofanele asuswe.
Kubi kakhulu, njengoba besho ngezansi, amanye ama-distros enza ukwahlukanisa okukodwa kuphela. Kufanele ngokuzenzakalela bahlukanise / ikhaya futhi bashiye impande okungenani benenketho yokwandisa, ngokuya ngenombolo yezinhlelo zokusebenza ezizofakwa ngokuhamba kwesikhathi, okungafanele zibe ziningi. Ama-Distrons alungile futhi ayasebenza kusuka ekufakweni.
Imvamisa kunephutha lezimvume ngezikhathi ezithile ne / home lapho kushintshwa i-distro, kepha kulula ukuyilungisa (nge "chown" ne "chmod), kepha into ebalulekile, njengoba usho, ukuthi yonke idatha yakho ihlala ingaguquki.
Ithiphu enhle! Manje sengiyazi ukuthi inhloso yokwehlukanisa idiski nge / ikhaya eyani nokuthi ama-distros amaningi ngokuzenzakalela awakwenzi. Into enzima kufanele kube ukubala ukuthi ingakanani ngayinye ukuze ingashodi.
Sawubona futhi wamukelekile esizeni sethu 🙂
Ukubala akunankinga, uma ucabanga ukuthi une-1GB ye-RAM noma ngaphezulu, ngingathi:
Shintsha noma ushintshe indawo - »512MB
/ ekhaya - »Okunye ... konke okufunayo
Ukubingelela nanoma yimiphi imibuzo onayo, usazise 😉
Akunzima ngempela. Unganika ukwahlukanisa kwezimpande [/] (ukuze unethezeke) isikhala esiphakathi kuka-8 no-15 Gb. Ukushintshanisa imemori yakho ye-RAM kabili inqobo nje uma ingeqi i-1Gb, bese kuthi konke kube ukwahlukanisa kwasekhaya [/ ikhaya].
Lapho ngifaka i-Arch ngafaka ama-20 gbs empandeni (/), ngishintsha i-500mb bese ngigodlela okusele ekhaya.
Dlula ngokufaka amaphakheji ami, i-Blender, i-LibreO, njll.
Ngemuva kwesikhashana ngaphelelwa isikhala sezimpande.
Uma kunjalo, ngenzenjani? zama pacman -Scc
Yebo, kuzodingeka ungabheki i-Pacman cache kuphela, kepha nezinye izinkomba ezifana nezingodo nokunye okunjalo. Nge-20Gb kuyaqabukela kakhulu ukuthi impande igcwaliswe ngaleyo ndlela.
Ngiyabonga kakhulu, lezi zinto ezichazwe kahle zingcono kubantu abangafundile abathanda noma abangahlukanisi ikhaya nomlenze weSerrano ham 😀
Ozithobayo, futhi ngiyabonga kakhulu.
Kuze kube manje yonke into eyisihluku ... ukwahlukanisa / ikhaya kusuka / sigcina izilungiselelo namafayela ethu. Manje umbuzo wami ngabe ikhona indlela yokugcina izinhlelo zokusebenza ezifakiwe?
Siyabonga ngomlingo ongaka !!
Bengilokhu nginombuzo futhi kuze kube manje kwenzeka kimi ukuthola impendulo, ngenxa yale ndatshana.
Ngiyazi futhi ngiyaqonda ukuthi kusiza kangakanani ukuba nama-.icons namafolda .themes EKHAYA lethu, kepha kwenzekani ezimweni ezinjengezithonjana zeFaenza ezifakwe nge-ppa? izithonjana nezindikimba nge-ppa zihlala zifakwa ku- / usr / share.
Kukhona indlela yokushintsha lapho kuzofakwa khona iFaenza, iNumix, iNitruxOS, njll. zifakwa nini nge-ppa?
yeka tuto enhle
Ukuthuthela eCuba Iqiniso noma inganekwane?